Accueil > Gazetin'ny nosy > Inty sy Nday: Asio mangarahara koa e !
Inty sy Nday: Asio mangarahara koa e !
Tamin’ny fihaonan’ny Loholon’i Madsagasikara tamin’ireo mpikambana ao amin’ny governemanta tamin’ny herinandro lasa iny no nanamarihan’ny minisitra ny Vola, Andriambololona Vonintsalama, fa misy mampiahiahy ny famaritan’ireo mpandraharahan-tsolika (Total, galana, Jovena, Shell) ny vidin-tsolika eto Madagasikara. Haingana dia mihatra ny fiakaran’ny solika eto, na efa midina aza ny eo amin’ny tsena iraisam-pirenena, hoy ny minisitra ny Vola, ary maharitra ny fihenany eto amintsika na inona na inona mitranga eo amin’ny tsena iraisam-pirenena.
Tao anatin’izany dia hoe « hisy fanadihadiana hatao, ary nitakiana an’ireo mpandraharahan-tsolika ny hitondran’izy ireo famelabelarana an’ireo pitsopitsony ifotoran’ny kajikajy enti-mamaritra ny vidin’ny solika eto ».
Ny akom-baovao fantatra ankehitriny dia efa misy vondrom-barotra vahiny (cabinet d’étude) izay manao fanadihadiana momba an’io raharaha iray io, ka ny fitondram-panjakana malagasy sy ny Banky iraisam-pirenena no no miara-misalahy mampanao an’izany fanadihadiana izany. Dia voalaza fa mbola tsiambaratelo hatreto ny vokatr’io fanadihadiana io.
Ny tsikaritra aloha, hoy ny loharanom-baovao, dia mahazo tombony mihoa-pampana efa ampolon-taonany amin’ny famaritana an’io vidin-tsolika io ireo mpandraharahan-tsolika eto ireo.
Dia misy izany ny fandrafetan’ny fitondram-panjakana malagasy tetiandro hirosoana amin’ny fifampiraharahana amin’ireo mpandraharahan-tsolika ireo, ka ny tanjona dia ny mba hanenana ny vidin’izy io ho an’ny mpanjifa malagasy, hono.
Zava-dehibe aloha ilay finiavan’ny fitondram-panjakana, ary izahay manokana teto amin’ity gazety ity dia efa nanitrikitrika ny maha-rariny ny ijerena ny tontolo manodidina an’io famaritana ny vidin-tsolika eto io. Ny antony dia na ny taratry ny fifaninanan’ireo vondrom-barotra vahiny mpandraharahan’ny solika eto amintsika ireo aza tsy taratra. Dia mitovy hatrany ny famaritan-dry zalahy ny vidin-tsolika, izay marihina fa tsy maha-afa-bela ny fitondram-panjakana, izay miaraka amin’ny « OMH » (Ofisy malagasy momba ny solika).
Tokony ampanjakaina mihitsy ny mangarahara fa ny fantatra dia maroloha sady mavesatra koa ny tataon-kaba sy hetra alain’ny fanjakana amin’io tontolon’ny solika io. Toa ny antsasaka ny sandan’ny solika ivarotana azy amin’ny mpanjifa dia hetra sy haba ary tataon-javatra maromaro avokoa.
Ka tsara ilay finiavan’ny fitondram-panjakana fa tokony tsy hiantehitra koa amin’ny orin’asa vahiny isika amin’ny fampanaovana fanadihadiana (études) toa izao, na dia ny Banky Mondialy aza no mamatsy vola an’ilay fanadihadiana. Izany ko ave dia ilàna Banky Mondialy ? Mety hisy talapetraky ny mpiaotra ihany mantsy na fifampiarovana amin’ny samy mpiombon-tombontsoa any ambadika any izao raharaha izao.
Mbola tranga iray itakian’ny hasin’ity firenena malagasy ity ny tia tanindrazana koa izay saro-piaro amin’ny tena fikatsahana ny tombontsoam-bahoaka izao raharaha iray izao.